प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालको यस्तो हर्कत, भरतपुरकी उपप्रमुखलाई आयो ज्यान मार्ने धम्की !
चितवन । सत्ताधारी (ने.क.पा.) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहालको मनमाैजीबिरूद्ध लडिरहेकी भरतपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाहमाथि ज्यान मार्ने धम्की दिइएको छ ।
रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर हुन् । कांग्रेसकै मतदाताले उनलाई भरतपुरको मेयर जिताएका थिए । उपप्रमुखमा भने कांग्रेसकै शाहले चुनाव जितेकी थिइन् ।
स्वप्निल सुवेदीको नाममा खोलिएको फेसबुकबाट अनेरास्ववियू, युवा स‌ंघजस्ता संगठन नाम लिँदै चेतावनीपूर्ण भाषामा सतर्क मात्रै गराएको भन्दै धम्क्याइएको शाहले जानकारी दिइन् ।
धम्की आउनुभन्दा २ दिनअघि पनि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेत्र सुवेदीले शाहमाथि दुर्ब्यवहार गरेका थिए । कार्य सम्पादनका क्रममा जनप्रतिनिधिलाई नगन्ने गरेका सुवेदीले शाहलाइ ''मेयरका अघि तपाईं को हो ?'' भन्दै अमर्यादित व्यवहार गरेका थिए ।
लगत्तै, भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखको सचिवालयले चलाउँदै आएको फेसबुक म्यासेन्जरमा ‘स्वप्नील सुवेदी’ नामको आइडीबाट ज्यान मार्ने धम्की दिइएको हो । प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले दुर्ब्यवहार गरेपछि उपमेयर शाहले मेयर दाहाललाई यसबारे जानकारी गराएकी थिइन् । तर, प्रचण्डपुत्री दाहालले वेवास्ता गरेकी थिइन् ।
मेयर रेणु दाहालको माैनता र आफुमाथि ज्यान नै लिने धम्की आएपछि शाहले सुरक्षा खतराका कारण प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी गराएकी छिन् । प्रहरीले नै यसबारे अनुसन्धान अघि बढाउने भएपछि प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालको निर्देशनमा भरतपुर महानगरले ''घटना गम्भीर भएको र यसबारे अनुसन्धान गर्ने'' जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस चितवनले भरतपुर महानगर उपप्रमुख तथा कांग्रेस नेतृ शाहलाई आएको ज्यान मार्ने धम्कीप्रति आपत्ति जनाएको छ।